‘जनमत पार्टी’ को अध्यक्ष बने सिके राउत स्वतन्त्र मधेस र जनमत संग्रहकाे मुद्दा परित्याग, पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय – DailyHamroNews
‘जनमत पार्टी’ को अध्यक्ष बने सिके राउत स्वतन्त्र मधेस र जनमत संग्रहकाे मुद्दा परित्याग, पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय
४ चैत, सिराहा । सिके राउतको पार्टी (स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन) को नाम परिवर्तन भएको छ । सिराहामा सोमबार सम्पन राष्ट्रिय परिषद बैठकले राउत नेतृत्वको पार्टीको नाम ‘जनमत पार्टी’ राख्ने निर्णय गरेको छ ।
लाहानमा सम्पन्न दुई दिने बैठकले जनमत पार्टीको ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिसमेत निर्माण गरेको छ । पार्टीको अध्यक्षमा डा. सिके राउत रहेका छन् भने ३४ जना सदस्य छन् ।
बैठकले सरकारसँग भएको ११ बुँदे सहमतिलाई स्वागत गर्दै ‘ऐतिहासिक तथा मधेसी जनताका लागि अभूतपूर्व’ सहमति भनेको छ । उसले स्वतन्त्र मधेसका साथै जनमत संग्रहकाे मागसमेत परित्याग गरेको छ ।
कोको परे केन्द्रीय समितिमा ?
त्यसैगरी सिरहाका राजकुमार यादव र सतिला यादव पनि केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । बर्दियाका अब्दुल खान र झापाकी कौशिला महतो केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् ।
त्यस्तै मोरंगका परमेश्वर मुर्मु, सुनसरीका सीताराम पण्डित, धनुषाका इन्द्रजीत यादव, सर्लाहीका नरेश कुसवाहा, रौतहटका बिरेन्द्र साह र बाराका दिनेश यादवलाई केन्द्रीय सदस्य बनाइएको छ ।
त्यसैगरी ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा पर्साका सञ्जय साह, नवलपरासीका ध्रुब गौड र दुर्गा चौहान, रुपन्देहीका भोपेन्द्र यादव, कपिवस्तुका हरिकुला खान, दांगका राधा यादव, बाँकेका इरफान अहम शेख, कैलालीका महेन्द्रप्रसाद चौधरी र सुनसरीका आशा मेहता छन् ।
परिवर्तित पार्टीको झण्डामा क्रमशः रातो, सेतो र हरियो रंगको ठाडो धर्काको बीचमासेतो स्ट्रीपमा रातो रंगको अष्टदल राखिनेछ । उक्त पार्टीको चुनाव चिन्ह पनि अष्टदल नै राखिने निर्णय गरिएको छ । पार्टी दर्ताका निम्ति निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।
सिके राउतको पार्टीले स्वतन्त्र मधेसको नारा र नाममात्रै होइन, यसअघि उठाउँदै आएको जनमत संग्रहको माग पनि छाडेको छ । बैठकको निर्णयमा कहीँ पनि जनमत संग्रहको माग उठाइएको छैन
जनमत पार्टीको गठनसँगै जनमत जुटाउन जनतासमक्ष जाने र जनमतबाटै संवैधानिकै रुपमा जनताको समस्या, माग, हकहित र अधिकारका लागि अनवरत समर्पित र निःस्वार्थ भावले संघर्ष गर्ने प्रतिवद्धता बैठकले गरेको पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अब्दुल खानले विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन् ।
सिरहाको लहानस्थित मारबाडी सेवा सदनमा आइतबारदेखि शुरु भएको बैठकमा कार्यकर्तालाई मोवाइल बोक्न निषेध गरिएको थियो । बैठक अवधिभर खाने, बस्ने व्यवस्था सेवासदनभित्रै गरिएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस् : पञ्चकन्याबाट राष्ट्रिय गान गाउँदै सिके राउतको बैठक सुरु, नागरिकता अनिवार्य !
बैठकले कार्यकर्तालाई नागरिकता बोक्न लगाइएका कारण पार्टी दर्ताका निम्ति रहेको ती पार्टीका कार्यकर्ताहरुले बताएका छन् ।
के-के भए निर्णय ?
प्रहरी हिरासतमा मारिएका बाँकेका जिल्ला संयोजक राम मनोहर यादवको परिवारलाई सरकारसँगको सहमतिअनुसार क्षतिपूर्ती तथा परिवारका एक जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराउन पहल गर्न समितिलाई नै जिम्मेबारी दिइएको छ ।
Previous विदेशबाट फर्किँदै हुनुहुन्छ ? तपाईंले ल्याएको सामान विमानस्थलमा जफत हुनसक्छ
Next महालेखाको सुझाव : सामाजिक सञ्जालबाट कर उठाऊ, अनलाइन सपिङलाई पनि नछोड